Home Wararka Shacabka Muqdisho oo maanta loo diiday inay maraan wadooyinka Muqdisho
Shacabka Muqdisho oo maanta loo diiday inay maraan wadooyinka Muqdisho
Waxaa saaka oo Axad xiran qaar kamid ah waddooyinka Magaalada Muqdisho, waxaana dadka shacabka ay yihiin kuwo lugeeynaya, maadaama aan la ogoleyn in gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan waddooyinkaas xiran.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ayaa lagu arkayaa waddooyinka xiran iyaga oo taagan, waxaana Jidadka xiran kamid ah waddooyinka u dhaw Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale wadada ayaa ka xiran inta u dhexeeysa wadada ka timaada Garoonka ee marka Isgoyska KM-4 ilaa Tarabuunka, sidoo kalena waxaa xiran wadada Warshadda Caanaha, sida ay kusoo warrameen dad shacab ah oo laga celiyay wadadaas.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta loo xiray waddooyinka qaar ee Magaalada Muqdisho, isla markaana ma jiro wax faah faahin ah oo laamaha amniga dowladda Federaalka Soomaaliya ka bixiyeen xirnaashaha waddooyinka Magaalada ee xiran .
Inta badan shacabka kunool Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ayaa la kulmo dhibaatooyinka noocaan oo kale ah, mana ah markii ugu horreysay ee dad weynuhu kusoo toosaan waddooyinka muhiimka ah ee Caasimadda oo xiran.
Previous articleKooxihii Farmaajo iyo Fahad taageersanaa oo bilaabay in ay qaataan Shahaadada
Next articleHuge Fire Destroys Commercial Hub in Breakaway Somali Region
MW Biixi oo sanadka cusub ee Islaamka 1442 hijriyada ugu hambalyeey...